3D scanning tech yakashandiswa muMakambani Emotokari
Yakasikwa naRaiproto Rapid Kugadzira musi waChikunguru 07, 2021
Kunyorera kumashure Neye kukurumidza kuvandudzwa kwemotokari indasitiri, akasiyana ma brand vagadziri vari kukwikwidza kugona, CNC kugadzira, 3D kudhinda, vharuvhu laminating, nezvimwewo vaumba hombe maindasitiri cheni. Huwandu hwemotokari dzekumba munyika yangu huri kuramba huchikwira, uye ...
Zvamunoda kuziva nezve 3D kudhinda indasitiri?
Yakasikwa naRaiproto Rapid Kugadzira musi waChikunguru 02, 2021
3D yekudhinda tekinoroji inonziwo yekuwedzera yekugadzira tekinoroji, iyo yakavakirwa padhijitari modhi mafaera, ichishandisa hupfu simbi kana plastiki uye zvimwe zvinosungirwa zvinhu kuvaka zvinhu nekudhinda netai netai. 3D kudhinda kunowanzoitwa nekushandisa tekinoroji m ...
Ndeipi pfungwa yeCCC machine machira ekugadzirisa zvikamu?
Yakasikwa naJuniProteproto Rapid Kugadzira paJune 24, 2021
The machine zvakarurama CNC machine centre ndiko kunonyanya kunetsa vatengi. Iyo chaiyo machining kurongeka kweCCC machining centre inoreva padanho rehunyanzvi hwechigadzirwa chakagadzirwa. Mune indasitiri yemuchina, machining kurongeka uye kukanganisa kwemakine ndiwo mazwi ari maviri ekuyera ...
3D Kudhinda mumotokari kuchengetedza nguva uye mutengo
naJune 22, 2021
Zvichifambiswa nenhepfenyuro, kudhinda kwe3D kwakazviratidza kuruzhinji semhizha yepamusorosoro, uye simba rayo rezvenhau rakazosvika pakakwirira mushure megore ra2023. Muchokwadi, kudhinda kwe3D kuchiri tekinoroji yekugadzira. Mumakore achangopfuura, indasitiri yenyika yangu yekugadzira yakagadzira ...
Iyo yepamusoro gumi nemakumi mashanu emakambani ekugadzira machining emakambani
naJune 18, 2021
1. Protolabs www.protolabs.com Anopfuura makumi matatu epurasitiki nesimbi CNC michina yekushandisa inowanikwa kune anoshanda prototypes uye ekupedzisira-shandisa zvikamu mune nekukurumidza sezuva rimwe. Tora quote ine yemahara dhizaini. 2. Xometry www.xometry.com Online CNC michina sevhisi inopa pakarepo makotesheni pane yakakwira-chaiyo ...
Yakasikwa naYegaProto Rapid Kugadzira paJun 17, 2021
Sezvo iwe uchienderera mberi nerwendo rwako rwekuvandudza uye kuunza chigadzirwa chitsva kumusika, une dzakateedzana sarudzo dzekuita kana zvasvika pakuratidzira - kunyangwe iwe uchizotanga Hardware kana chigadzirwa che software, kana mubatanidzwa wezvose - iwe unofanirwa kuve nemuenzaniso ...
3D Metal Kudhinda - 7 Zvakajairika Nhema Dzakavhomorwa
Yakaburitswa naGadziraProto Rapid Kugadzira paJun 10, 2021
Kushaikwa kwekunzwisisa kwesimbi 3D kudhinda kugona uye kukwana kunoramba kuri rimwe rematambudziko akakosha mukubvumidzwa kukuru kwetekinoroji. Mafungiro asiri iwo akabuda akatenderedza tekinoroji anongowedzera mafuta kumoto. Muchinyorwa chanhasi, tichave tichiputsa zvimwe zve ...
Chii chinonzi Rapid Micro Staping Machining?
Yakaburitswa naGadziraProto Rapid Kugadzira paJun 01, 2021
Kutsemura vhura chero mudziyo wemagetsi uye iwe unowana iwo akawanda madiki zvidimbu mukati. Kugadzira izvi zvinobatanidza uye nhovo ibasa rakaoma, rakaomesesa kupfuura kutsika, kukotama, uye kugadzirwa kunoitwa pazvikamu zvikuru. Nechinhu chimwe chete, izvo zvemunhu maficha pa th ...
Inoita Sei CNC Tekinoroji Yekushandisa Kuwedzera Kwevashandi Kushanda
Yakanyorwa naGadziraProto Rapid Kugadzira muna Chivabvu 12, 2021
Imwe yematambudziko inosangana neCCC tekinoroji zvitoro inosangana nayo kukura. Ehe, zvinoita sezvisinganzwisisike kuti kukura kwebhizinesi rako inyaya asi zvakadaro zvakadaro. Kunyanya kutariswa kwevaridzi vezvitoro zvemuchina kana yavo mikana ichikura ndevashandi. Zvinotora yakawanda nguva f ...
Iyo yekufa-yekukanda chikamu dhizaini yakangokosha senge chishandiso
kubudikidza neGadziraProto Rapid Kugadzira musi waApril 19, 2021
Kufa kwekukanda masheya akakwirira pane iyo runyorwa rweakakosha mashandiro esimbi. Sezvo nedzimwe nzira dzekukanda, simbi yakanyungudutswa inodururwa muhuviri-chidimbu, asi kufa kukanda kunoita saizvozvo pasi pekumanikidza, kumanikidza izvo zvinhu kupinda munzvimbo yega yega nekomboni yemukati mukati. Izvi zvinoreva kuti kufa cas ...
Createproto yakagadzira iyo yekukurumidza yekushandisa ne3D kudhinda kweCraphene zvinhu tekinoroji
kubudikidza neGadziraProto Rapid Kugadzira musi waApril 13, 2021
Kekutanga nguva iyo Createproto yakashandisa graphene kugadzira chimbi chimbi kune zvinodiwa nevatengi zveyakasimba tensile, mushure memwedzi wekuyedzwa, mutengi anokurumidza tooling akazopedzisira adhindwa. Parizvino, izvo zvekudhinda zve3D zviri pamusika zvakanyanya epurasitiki, ini ...
Ndege Dhizaini (Chikamu 2): Kuwedzera Mahoridhe
Yakasikwa naProtoProto Rapid Kugadzira paOct 25, 2020
Ngatikurukurei kuyerera kwechizvino ndege dhizaini dhizaini uye semuenzaniso iko kushandisa masevhisi e prototype inogadzira iyo prototype kuyedza. Mazuva ano mainjiniya ekugadzirisa zvisarudzo vanofunga kuti kushandisa masimba akawandisa padanho rino hazvina maturo uye semunhu anodya nguva. Ad ...
3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Rapid Prototyping, Cnc Kuchengetedza, Kukurumidza Prototyping, Kurumidza Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira,